Burmese Liaison - Tukwila School District
Welcome to the Tukwila School District!
စက်တင်ဘာလ တွင်ပြုလုပ်မည့် ကျောင်းဖွင့်ပွဲ အချိန်စရင်းများ
ဖေါ်စတား အထက်တန်းကျောင်း ဒေသဆိုင်ရာ တိုးချက် မူ့လုပ်ငန်းစဉ်းဝေးပွှဲစက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် ညနေ ၅နာရီခွဲ
ဖေါ်စတား အထက်တန်းကျောင်း ဖွင့်ပွဲ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေ ၅နာရီ
ခက်စကိတ်ဗြူး မူလတန်းခက်စကိတ်ဗြူး မူလတန်း ကျောင်း ဖွင့်ပွဲ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၅နာရီခွဲ
ရိုးဝါးတား အလယ်တန်းကျောင်း ဖွင့်ပွဲ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ညနေ ၆နာရီခွဲ
2016-17 (၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ကျောင်းပညာသင်နှစ်)
—Aug. 22-23: New student registration (ကျောင်းသားအသစ် မှတ်ပုံတင်သောနေ့)
—Aug. 25 and 26: TRI-optional professional-development days for staff (အခွီးလာကျောင်းမှဝန်ထန်းများများဖွိ့ဖြိုးတိုးတက်မူနေ့)
—Aug. 31: All-staff kick off day (၀န်ထန်းများနေ့)
Sept. 1: Building-directed day for certificated staff
—Sept. 6: First day of school (ကျောင်းစဖွင့်သောနေ့)
—Oct. 14: No school (TRI-optional for certificated staff) ( ကျောင်းပိတ်သည်)
—Nov. 11: No school (Veterans Day) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—Nov. 23: Early Release
—Nov. 24-25: No school (Thanksgiving break) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—Dec. 19-Jan. 2: No school (winter break) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—Jan. 16: No school (Martin Luther King Jr. Day) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—Jan. 27: No school (teacher prep) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—Feb. 20-21: No school (President’s Day and mid-winter break) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—April 3-7: No school (spring break) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—May 26: No school OR snow make-up day (ကျောင်းပိတ်သည်)
—May 29: No school (Memorial Day) (ကျောင်းပိတ်သည်)
—June 20: Last day of school (happy summer!) (ကျောင်းပိတ်
တခွီလာကျောင်းခရိုင်မှ ညာဏ်ရည်အမျိုးမျိုးဖြင့်တက်ရောက်နိုင်ရန် ၀င်ငွေနည်းသောမူကြိုကျောင်းခလေးများအတွက်ပရိုဂရန် နှစ်ခုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အစောပိုင်းငယ်ဘ၀နှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအစီစဉ်(ECEAP) နှင့် ထိပ်နေရာဍ်စတင် ခြင်း တို့ဖြစိသည်။ ဒီပရိုဂရန်နှစ်ခု လုံးဧ။်ရည်ရွက်ချက်မှာ ခလေးများသူငယ်တန်းကိုအောင့်မြင်ကြော်လွားနိုင်ရန် ကူညီထောင့်မပေးရန်ဖြစ်ပြီး မူကြို၊ မိသားစုပံ့ပိုးမူနှင့်ခလေးကျန်းမာရေး၊ အစာအဟာရညှိနိုင်းမူများပါ ပါဝင်သည်။
ECEAP isastate-funded program that serves3and4year olds (as of August 31 of the school year) in eligible families. This program is currently offered at Cascade View Elementary and Thorndyke Elementary.
ECEAP ပရိုဂရမ်မှာ ပြည်နယ်အစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေမှ အသက် ၃နှစ်မှ၎နှစ် အရွယ်( ကျောင်းဖွင့်ချိန် သြဂုတ် ၃၁ရက်အတွင်း)အရည်အချင်းပြည့်သော မိသားစုများအတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်အား လက်ရှိ ခက်စကိတ်ဗြူးမူလတန်းကျောင်းနှင့် သွန်းဒိုက် မူလတန်းကျောင်း၌ ဖွင့်ပေးနေပါသည်။
For more information, contact Family Support Specialists: (အချက်အလက်ပိုမိုသိလိုပါက မိသားစုအထူးပံပိုးပေးသောသူများအားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်)
သင့်ခလေးများဖွံဖြိုးတိုးတက်မူ့နောက်နှေးနေသည်ဟုထင်ပါသလား။ သင့်အားထောင့်ပံ့ပေးနိုင်သော ၀န်ဆောင်မူ့ အလကားရနိုင်သည်။Jane DeMello-Long at 206-901-8033 ခေါ်ပြီး ခလေးအတွက် အပွိုင့်မန့်ယူပါ။
ကျောင်း၏ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၌ ၅နှစ်ပြည့်ပါက တခွံလာကျောင်းခရိုင်မှ သူငယ်တန်း ကျောင်းသားများအား တစ်နေကုန် အလကားစာသင်ပေးပါသည်။ သူငယ်တန်း ကျောင်းစတက်နိုင်ရန် ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်၌ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ပါဝင်မူ့ပြုလုပ်ကြ မှသာ ကျွှန်ုပ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်လွယ်ကူစွာ ခလေးများအား လွဲေ့ပြာင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူငယ်တန်းမှ ဆယ့်နှစ်တန်းအထိ အောင်မြင်စွာကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်သည်။
CV Care Night ( Oct 6, 2016 at 5:30 pm)
နေ့ရက် ။ ကြာသပတေးနေ့ အောက်တိုဘာလ ၆ရက် ညနေ၅နာရီခွဲ
နေရာ ။ ခက်စကိတ်ဗြူးမူလတန်းကျောင်း
လာနိုင်သောသူများ ။ ခက်စကိတ်ဗြူးမူလတန်းကျောင်း မှမိသားစုများ
Child Find: Do you believe your 3- to 5-year-old hasadisability? We want to offer FREE services!
၃နှစ် မှ ၅နှစ် မသန်စွမ်းသောခလေးအရွယ် ရှိပါလို့ယုံကြည်ပါသလား။ ထိုခလေးများအတွက် ၀န်ဆောင်မူ အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးနေပါ။
The Tukwila School District is proud to participate in Child Find,alegally-required process to locate, identify, and evaluate children with developmental delays to ensure they receive services to which they are entitled. If you suspect your child—ages3to 5—hasadisability that has not been evaluated by the school district, please make an appointment to do so. We want your child to receive the full range of services he or she needs to be successful in school!
Child Find evaluations are held in the Tukwila School District at Cascade View Elementary, 13601 32nd Ave. S., Tukwila. Contact the school t, 206-901-8033, to make an appointment outside of the screening dates below.
ခက်စကိတ်ဗြူးမူလတန်းကျောင်း ၁၃၆၀၁ ၃၂ အက်ဗန်းနယု တခွီလာ ကျောင်းမှာ မသန်စွမ်းသောခလေး ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ ကျောင်းမှ စိတ်ပညာရှင် ဖြင့် တွေ့ရှိဘို့ရန် အတွက် ၂၀၆ ၉၀၁-၈၀၃၃ အားခေါ်ပြီး ရက်ချိန်းယူနိုင်ပါသည်။
Child Find screening dates for the 2016-2017 school year:ရက်ချိန်းယူနိုင်သည့်ယခု ခုနှစ ကျောင်းအချိန်
September 28, 8:30-11 a.m.စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
October 19, 8:30-11 a.m.အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
November 16, 8:30-11 a.m.နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
January 18, 8:30-11 a.m.ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
February 22, 8:30-11 a.m.ဖေဖ၀ါရီလ ၂၈ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
March 29, 8:30-11 a.m.မတ်(ခ်ျ)လ ၂၉ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
April 26, 8:30-11 a.m.ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
May 24, 8:30-11 a.m. မေလ ၂၄ ရက် ၈နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီ
Cascade View Elementary open house event.
ပါဝင်ပေးကြသော မိသားစုများ ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်သား သမီးပညာရေး တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက်အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မူ့ ကို ဆွတ်ခူးပါစို့။
Free application for Federal Student Aid ( FAFSA)
နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင့်ခွင့်ရသောသူများ သာရွေးချယ်မည်။
Haveavalid Social Security Number. လူဝင်မူ့ကြီးကြပ်ရေးမှ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ရှိရမည်။(Students from the Republic of the Marshall Islands, Federated States of Micronesia, and the Republic of Palau are exempt from this requirement.)ပြည့်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အုပ်ချုပ်သည့်နိုင်ငံများဖြစ်သော မာရှယ်အိုင်လန်၊ မက်လွန်နီးဆီးယား၊ ပလောင်း နိုင်ငံများမပါ။
Haveahigh school diploma oraGeneral Education Development (GED) certificate, or have completed homeschooling. ၀ါရှင်တန်အထက်တန်းကျောင်းမှ ဘွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ် GED ရရှိထားသောသူဖြစ်ရမည်သို့မဟုတ် အိမ်ကျောင်းပှ ကျောင်းပြီးထားသောသူဖြစ်ရမည် ။If you don’t, you may still be eligible for federal student aid if you were enrolled in college or career school prior to July 1, 2012. Go to http://studentaid.ed.gov/eligibility/basic-criteria for additional information.
Be enrolled in an eligible program asaregular student seekingadegree or certificate. ဘွဲ့ရသာမှန်ကျောင်းသား သို့မဟုတ် တရားဝင်လှက်မှတ် ရရှိနိုင်သော ပရိုဂရမ်များသာ စရင်းသွင်နိုင်သည်။
Maintain satisfactory academic progress.ကျေနပ်စရာကောင်းသော ပညာသင်နှစ်တိုးတက်မူ့မှတ်တန်း အားထိမ်းသိန်းထားပါ။
Not owearefund onafederal student grant or be in default onafederal student loan. ပြည်နယ်အစိုးရ ထောင့်ပံ့ကြေးအကြွေးရှိသူ သို့မဟုတ် ကြွေးဆပ်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်း ရှိသူမဖြစ်ရ။
Students eligible for WASFA must meet the following criteria:
အောက်ပါသတ်မှတ်ထားသော စံချိန်မှီ မှသာ ပညာသင်ဆုကျေးရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
Must have graduated fromaWashington high school or obtainedaGED
၀ါရှင်တန်အထက်တန်းကျောင်းမှ ဘွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ် GED ရရှိထားသောသူဖြစ်ရမည်။(or will do so before beginning college)
အထက်တန်းကျောင်းမှ ရသောဘွဲ့ သို့မဟုတ် ညီမျှသောဘွဲ့ရရှိစဉ်အတွင်း ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်တွင် ၃ နှစ်ဆက်တိုက်နေသောသူဖြစ်ရမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စတွင်အမြဲတန်းနေထိုင်ရန်ရှောက်ထားသော သူများ ထိုလျှောက်လွှာ စာ၇ွက်အား လက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။
၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ သတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုချက် ဖြင့်ဘောင်ဝင်ရမည်။
Financial Aid Night Announcement
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ ပညာသင်စရိတ် ထောင့်ပံ့ကြေး ရှောက်လွှာ များကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစတင် ရှောက်နိုင်ကြောင်း ဒီနှစ် အတွင်း အထက်တန်းကျောင်း ပြီးမည့် ကျောင်းသားများအား အသိပေးလိုပါသည်။ Foster အထက်တန်းကျောင်း မှကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းပြီးရင် ကောလိမ့်တက်နိုင်ရန် စာရွက်စာတန်းများ ဖြည့်ဘို့ အထက်တန်းကျောင်း၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထောင့်ပံကျေးရရန် ကူညီပါမည်။
Changes to School Calendar (10/4/2016)
Tukwila School District have been made changes to the 2016-2017 school calendar. You will receive an updated printed calendar in the next few weeks. There are three major changes:
1. Some of the Early Release days have been eliminated. On those days students will attend all day instead of being released early. The first of these days is November 2.နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့သည် ကျောင်းစောစောပြန်လွတ်သောနေ့မဟုတ်ပါ။ တစ်နေကုန် ကျောင်းတက်ရမည်။
2. High School Graduation has moved to June 16. အထက်တန်းကျောင်းသားများဘွဲ့ယူသောနေ့မှာ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။
3. The last day of school will now be June 20. ကျောင်းနောက်ဆုံး ပိတ်ရက်မှာ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။
အခမဲ့အ၀တ်အစားများနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကြင်၌အသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များ (CV Care Night ( Oct 6, 2016 at 5:30 pm)
CV Care Night
Foster Students and staff Cultural assembly. (မြန်မာကျောင်းသားများ မြန်မာလိုဝတ်ခဲ့ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
Care-night at Throndyke on November-17th-2016
Come and shop for FREE clothes for your children
ခလေးများအတွက်အ၀တ်အစားများ အလကားလာယူလို့ရပါတယ်။ ညနေ ၅နာရီမှ ၇နှစ်နာရီ အတွင်းလာယူနိုင်ပါတယ်။
Showlater after School Homework Club (အလယ်တန်းကျောင်း ၌ ကျောင်းလွတ်လျှင် အိမ်စာကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးသော အဖွဲ့)
When: Tuesday & Thursdays – Starts Nov. 1st. အင်္ဂါ နှင့် ကြာသပတေး နေ့များသာ ( လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ မှာစမည်)
Where: Showalter Middle School Room B117 ရိူးဝါးတား အလယ်တန်းကျောင်း ၊ အခန်း ၁၁၇
Time: 2:45 – 3:45 ၂ နှစ်နာရီ ၄၅ မိနှစ်မှ ၃နာရီ ၄၅ မိနှစ်အထိ။
Students are welcome to drop in and get help with Homework. There is no after school activity bus available.
Please contact Ms. Fichamba with any questions: fichambaj@tukwila.wednet.edu (206)901 7822
CPR training for Tukwila community ( တခွီလာ၌ နေထိုင်သောသူများအတွက် ရှေးဦးသူနာပြု သင်တန်း)
သင်တန်းကို လာတက်ရောက်ကြသော သူများ ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Cascade View conference ပြုလုပ်မည့်နေ့များမှာ
နိုဝင်ဘာလ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၀ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီခွဲ အထိဖြစ်ပါတယ်။ appointment မရသေးသူများ၊ အလုပ်အကိုင်ကြောင့်အချိန်ပြောင်းချင်သောသူများ ကျောင်းသားရေးရာဋါနမှ မဥမာကို အကြောင်းကြားပါ။
Showalter Middle School conference ပြုလုပ်မည့်နေ့များမှာ
နိုဝင်ဘာလ ၈ ၊ ၉ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ၈ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ အထိဖြစ်ပြီး ၉ ရက်နေ့ မှာတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၇ နာရီခွဲ အထိဖြစ်ပါသည်။ appointment မရသေးသူများ၊ အလုပ်အကိုင်ကြောင့်အချိန်ပြောင်းချင်သောသူများ ကျောင်းသားရေးရာဋါနမှ မဥမာကို အကြောင်းကြားပါ။
Foster High School conference ပြုလုပ်မည့်နေ့များမှာ
နိုဝင်ဘာလ ၈ ၊ ၉ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ၈ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ3နာရီ အထိဖြစ်ပြီး ၉ ရက်နေ့ မှာတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ3နာရီအထိတစ်ကြိမ် ညနေ ၄နာရီမှ ၇ နစ်နာရီတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ appointment မရသေးသူများ၊ အလုပ်အကိုင်ကြောင့်အချိန်ပြောင်းချင်သောသူများ ကျောင်းသားရေးရာဋါနမှ မဥမာကို အကြောင်းကြားပါ။
Highly Capable Kindergarten Testing ( တစ်စုံတစ်ခုကို ထူးချွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော သူငယ်တန်းခလေးမျာအတွက် စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ) အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအား သူငယ်တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အိမ်သို့ တခွံလာကျောင်းချုပ်မှ Monday, 11/7/2016 တွင်ပို့ပေးလိုက်ပါသည်။ မေးခွန်းရှိပါက ၂၀၆-၃၄၈-၇၂၂၈ ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
application_burmese (ထိုနေရာ နှိမ့်လိုက်ပါက မြန်မာလိုဘာသာပြန် ထားသော စာရွက် ရမည်)
School help in Burmese